တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်မှ ရိုက်ကူးထားသည့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်သည့်မြင်ကွင်းများပေးပို့ - Xinhua News Agency
ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်မှ ဆင်ခြေလျှောတစ်ခုအား အင်္ဂါဂြိုဟ် မျက်နှာပြင်ပေါ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ကို တရုတ်နိုင်ငံ ထျန်းဝန်-၁ ယာဉ်၏ rover ရှိ အရှေ့ကင်မရာမှ ရိုက်ကူးထားသော အဖြူ၊ အမည်းဓာတ်ပုံကို တွေ့ရစဉ် (Photo provided by the China National Space Administration)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းဝန်-၁ က အင်္ဂါဂြိုဟ် (Mars) ပေါ်သို့ ပထမဆုံးဆင်းသက်နေစဉ်နှင့် ဆင်းသက်ပြီးနောက် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုနှစ်ခုကို တရုတ် အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က မေ ၁၉ ရက်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်၏ တည်နေရာပြကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ရောင်စုံဓာတ်ပုံကို တွေ့ရစဉ် (Photo provided by the China National Space Administration)
ထျန်းဝန်-၁ မစ်ရှင်၏ ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်ကို သယ်ဆောင်ထားသည့် ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းပေါ်ရှိ ကွင်းပြင်ကျယ် Utopia Planitia ၏ တောင်ဘက်ခြမ်း၌ မေ ၁၅ ရက်က ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှလွဲ၍ ဂြိုဟ်တစ်ခုပေါ်သို့ အာကာသယာဉ် ဆင်းသက်နိုင်ခြင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဖြူနှင့် အမည်း ဓာတ်ပုံဖြစ်သော ပထမဆုံးဓာတ်ပုံအား အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော obstacle avoidance ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်မှ ဆင်ခြေလျှောတစ်ခုအား ပြသထားသည်။ ဓာတ်ပုံထဲ၌ ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်၏ အရှေ့ဘက်လမ်းကြောင်းမြေပြင်အနေအထားအား ရှင်းရှင်းလင်း မြင်တွေ့ရပြီး မြင်ကွင်းကျယ် မှန်ဘီလူးများကြောင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းပုံစံ ကွေးနေသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယပုံမှာမူ ရောင်စုံဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်၏ အနောက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် တည်နေရာပြကင်မရာမှ ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာဉ်၏ ဆိုလာပြားများနှင့် အင်တာနာကို ခေါက်ထားသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံထဲတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အနီရောင်အပေါ်ယံလွှာနှင့် ကျောက်တုံးများကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်သည်။
အာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ်ပေါ်ရှိ ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုလည်း ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းဗီဒီယိုတွင် ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ် (lander) နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် (rover) တို့က ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်စဉ် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ် (orbiter) မှ ခွဲထွက်နေသည်ကို ရိုက်ကူးပြသထားသည်။
Orbiter ၊ lander နှင့် rover တို့ပါဝင်သော ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဂြိုဟ်နီကြီး ခေါ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းပတ်ခြင်း၊ ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားလာခြင်းများကို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်း၌ ပြီးစီးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက ဆိုလာစနစ်ရှိ ကမ္ဘာ့လေထုကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
မေ ၁၅ ရက်က ဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်ပြီးနောက် lander နှင့် rover တို့သည် ကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
မေ ၁၇ ရက်က orbiter သည် rover နှင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြားတွင် ထပ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ရန် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး rover မှ ဓာတ်ပုံများနှင့် အချက်အလက်များ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် rover သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ lander မှ အောက်သို့ဆင်းရန် ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း CNSA က ဆိုသည်။ (Xinhua)
Update: China’s Tianwen-1 probe sends back Mars landing visuals
Source: Xinhua| 2021-05-19 21:15:26|Editor: huaxia
BEIJING, May 19 (Xinhua) — Two photos and two videos captured by China’s Mars probe Tianwen-1 during and after the country’s first landing on the red planet were released by the China National Space Administration (CNSA) on Wednesday.
The rover is now making preparations for moving down from the lander onto the Martian surface, CNSA said. ■
1-The black and white image taken by an obstacle avoidance camera installed in front of the rover of China’s Mars probe Tianwen-1 shows thataramp on the lander has been extended to the surface of Mars. The terrain of the rover’s forward direction is clearly visible in the image, and the horizon of Mars appears curved due to the wide-angle lens. (Photo provided by the China National Space Administration)
2-In the color photo taken by the navigation camera of Tianwen-1 probe towards the rear of the rover, the rover’s solar panels and antenna are seen unfolded, and the red soil and rocks on the Martian surface are clearly visible. (Photo provided by the China National Space Administration)